လေနုအေး: ထမင်းကြမ်း ယပ်ခတ်မစားတတ်သူများ
Posted by တန်ခူး at 12:05 AM
ထမင်းကြမ်းလေး ယပ်ခတ်စားချင်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောခဲ့မိပါတယ်။ ကိုယ့်လို ထမင်းကြမ်းတောင် မစားနိုင်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို စာနာရမှာကို မစဉ်းစားမိဘူး။
တချို့ကလည်း ပြောတတ်ကြသေးတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွား မကျောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ ကြီးတော်နွားတွေ လွတ်နေတာမြင်ရင်တော့ ကျောင်းသင့်ရင် ကျောင်းပေးရမှာပဲ ထင်တယ်နော်။ တကယ်တော့ တာဝန်သိတဲ့သူမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တာဝန်မသိတဲ့သူအတွက်တော့ ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူးပေါ့။
မတန်ခူးအိမ်ဘေးက ဦးလေးကြီး အပါအ၀င် ထမင်းကြမ်းယပ်ခတ် မစားတတ်တဲ့သူတွေကို အမနဲ့အတူ ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ခံစားချက် တွေ .. လေးစား မူတွေ တူပါတယ်..မ- ရေ..
တလောကပဲ နေ၀င်းမြင့် စာတချို့ ဖတ်ဖြစ်သေးတယ်။ အနုပညာရသ ပိုင်နိုင်မူ ကတော့.. နေရာတခု သီးသန့်ပါပဲ။
ဒါနဲ့..သားလေး က.. ထူးဆန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်တာ.. သိပ်သဘောကျတယ်..သမန်ကာလျှံကာ.. ကလေးဘာဝ ထက် ပိုတဲ့.. လေးနက် တဲ့ စိတ်ကလေး ကို ကျမတော့.. သဘောကျတယ်.. ( အရင်ပို့စ် ထဲက..ပြောမလို့..ပေါင်းပြောလိုက်တား)
စကားစပ်လို့.. စာပေ ဟောပြောပွဲပုံတချို့မှာ..ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေဦး လဲ တွေ့ရတယ်နော်..။ အလည်အပတ် ရောက်နေပီးသား ဆရာမကြီးကို..ဘာလို့များ ပွဲအစီအစဉ်ထဲ မထဲ့ တာလည်းလို့ တွေးနေမိတယ်။ ကျမ တို့ က..ခင်ဆွေဦး စာအုပ်တွေ နဲ့ လူဖြစ်ခဲ့တာလေ..။
မတန်ခူးပြောမှ သေချာ တွေးမိတော့တယ်။။
I agree, good post ...:D
I like Kyaw thu too for his moral.
အမရေ စာလေးဖတ်ပြီးတွေးနေမိတယ် ကျေးဇူးပါပဲ သတိတရ ဖြစ်စေတဲ့အတွက် လူကိုလူခြင်း သိတတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်း)
ကိုကျော်သူတို့လဲ ရှားမှ ရှားလူတွေကြောင့် တော်သေးတာပေါ့လို့တွေးမိပါတယ်..
အရေးအသား အတွေးအခေါ် အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါပဲ..
အစ်မ တင်စားသွားတာ တအားလှတာပဲ။ “ထမင်းကြမ်း ယပ်ခတ် မစားတတ်သူများ”တဲ့...။ သူတို့တွေမရှိရင် လူ့ဘောင်လောကကြီး ဘယ်လောက်များ အရုပ်ဆိုးသွားလိုက်မလဲနော်...
ပို့ စ်လေးကို လေးလေးစားစား ရင် နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်..။
လူမှုရေးလုပ်ငန်းကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေ အားလုံးကို ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
စေတနာမပါပဲ ဟန်ဆောင်လုပ်လို့မရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေကျလို့ ပိုတောင်လေးစားမိပါသေးတယ်။
ခုတလော ချိုသင်းလဲ အဲဒီလို လူတွေအကြောင်း တွေး တွေး မိနေတာ..။ သူတို့က အေးအေး ဖာသိဖာသာ နေနိုင်ပါရက်နဲ့ အတ္တကို ကျော်လွှားနိုင်သူတွေမို့ လေးစားချစ်ခင်ရတယ်။ တကယ်ကို အလေးအမြတ် ပြုပါတယ်။
By reading from alot of myanmar blogs,
My comment is that alot of myanmar middle aged married women are trying to escape from their married life by writing their dreams juz to escape from their real world and trying to pretend to be noble-mindset but actually they are really not and Run into their family business finally with narrowed minded in their very own real world...
မေရေ… တာဝန်သိတဲ့သူမှာ တာဝန်ရှိသတဲ့လား… ကောင်းလိုက်တဲ့ ညွှန်းဆိုချက်လေးညီမရယ်….ကျေးဇူးပါညီမရေ…
မမ ရေ… ဘာလို့ သက်ပြင်းချသွားတာလဲ…
ကေရေ… ခံစားချက်တွေ လေးစားမှုတွေ တူတာ အမှန်ပဲနော်.. အမခင်မင်းဇော်စကား ယူသုံးရရင် ရင်ဘတ်တူသူတွေပေါ့… ဟုတ်တယ်ကေရေ… ဆရာနေ၀င်းမြင့်ရဲ့ အနုပညာရသပိုင်နိုင်မှုက အံ့မခန်းပါပဲ…
သားအတွေးအခေါ်တွေက တခါတလေ ထူးဆန်းနေတယ်ကေရေ… ကြီးရင်ဘယ်လိုလာမလဲတော့ မသိဘူးလေ…
ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေဦးကို တွေ့ ရတော့ ကေ တွေးသလို အမလဲ တွေးလိုက်မိသေးတယ်… အမအထင်တော့ ပွဲစီစဉ်သူတွေလဲ နောက်မှ သိလိုက်တာများလားမသိဘူးလို့ …
ပေါက်ရေ… သေချာတွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရယ်…
အမရေ… ကျေးဇူးပါအမရယ်… အကြိုက်ချင်းတွေတူတယ်ဆိုတာ ဟိုတနေ့ က ကတည်းက သိလိုက်တယ်မရေ…
ကိုတောင်ပေါ်သားရေ… ဟုတ်တယ်နော်… လူကိုလူချင်း သိတတ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ… ခုလို လာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ညီမရေ… ဒီတခေါက်အိမ်ပြန်တော့ ဦးလေးကြီးလမ်းလေးကြည့်ပြီး ဦးလေးကြီးကို လွမ်းမိတာ အရမ်းပဲ…
ညီမထက်ရေ… ခုလို လာလည်ပြီး တခုတ်တရ ကော်မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ…
ညီမလေးရွှေပြည်သူရေ… ဟုတ်ပါရဲ့ညီမရယ်… လူ့ ဘောင်လောကကြီးကို မေတ္တာတရားနဲ့ အလှဆင်သူတွေပါ…
ကိုဆူးရေ… ပျောက်လှချည့်လား… ဘလော့ကိုလဲ သွားမရဘူး… မရေးတော့ဘူးလား… အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ နော်… အိမ်ပြောင်းသွားရင်လဲ လိပ်စာအသစ်လေးပေးပါဦး…
ကိုပီတိရေ… စေတနာမပါပဲ တကယ်ကို လုပ်လို့ မရတဲ့အလုပ်ပါ… ကျေးဇူးပါ…
ချိုသင်းရေ… အတ္တကိုကျော်လွှားနိုင်သူတွေ… အမပို့ စ်ခေါင်းစဉ်လေး အဲလိုပြောင်းပေးဖို့ တောင် ကောင်းတယ်နော်…
Anonymousရေ… ကျွန်မရဲ့ စာလေးတပုဒ်ကြောင့် တစုံတယောက်ကို အကျိုးရှိစေလို့ တဲ့ တစုံတယောက်ရင်ထဲ အေးမြငြိမ်းချမ်းသွားစေလိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလွဲရင် တခြားဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘူးပါဘူး… လူကြားကောင်း ပရိတ်နာရုံသက်သက်တော့ ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်တွေကို အသုံးမချတတ်ပါဘူး… Anonymousပြောတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိလူလတ်ပိုင်း မိန်းမဘလော့ဂါတွေကလဲ ကျွန်မနဲ့ ထပ်တူပဲဖြစ်ကြမှာပါ… ကျွန်မဟာ ကျွန်မမိသားစုကိုယ်ကျိူးလေးသာ ကွက်ကြည့်တတ်သူဆိုရင် ဒီလိုပို့ စ်မျိုးကို လုံလုံလဲလဲရေးရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး… တကယ်လို့Anonymousက လေနုအေးနဲ့ မစိမ်းဘူးဆိုရင် ကျွန်မရေးတဲ့စာတွေက တဆင့် ကျွန်မဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ သိနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကော်မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါ… တကယ်လို့ များ Anonymousမှာ ဘလော့တခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ နာမည်ဖော်ပြီး ကော်မန့် ပေးလို့ ရပါတယ်…. Personal တွေမပါပဲ ကိုယ့်အမြင်သူ့ အမြင်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးကြတာမျိူးကို ကျွန်မစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး…
… ကျွန်မဟာ ကျွန်မမိသားစုကိုယ်ကျိူးလေးသာ ကွက်ကြည့်တတ်သူဆိုရင် ဒီလိုပို့ စ်မျိုးကို လုံလုံလဲလဲရေးရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်မရေးတဲ့စာတွေက တဆင့် ကျွန်မဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ .................That's why I said " By reading alot of Blogs..".......
.Personal တွေမပါပဲ ကိုယ့်အမြင်သူ့ အမြင်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးကြတာမျိူးကို ကျွန်မစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး…
I sincerely don't really think that It's Not Possible in these Myanmar Blogs Sphere...
U 'll all hate me all your life By saying " SIncere Comments.."...
U all don't honestly have these kinds of Developed-attituded Yet...
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတာကြာပါပြီ... တချို့ Comment တွေဖတ်ပြီး ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ လာမရေးဖြစ်တာပါ။
စိတ်ထဲမှာ ရေးထားတာတွေကတော့ ပိုစ့်တခုစာတောင် မကအောင် များနေတာပါ...
စေတနာကောင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ စေတနာတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ စေတနာ၊ အဲဒီ ဦးလေးကြီးကို အသိအမှတ်ပြု ပေးတဲ့ တန်ခူးရဲ့စေတနာတွေကြောင့် ပိုစ့်လေးက သိပ်လှနေတာ အမှန်ပါပဲ...
အများအကျိုး ရွက်သည်ပိုးက ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လဲ မဖဲ့မစောင်း ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရှေးရှုနှင်လော့
(ရွှေဟင်္သာ ဆရာတော် ဘုရားကြီး)
ဘုရားသော်မှ မနေရ၊ မင်းက ဘာမို့လဲ
(တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ)
အမတန်ခူးရေ... ကောမန့်တွေ ဖတ်ရင်း ရွတ်ဖြစ် သွားတယ်။
မြေနီလမ်းကလေးတစ်ခုမှာ သူ့အိမ်က အုတ်နီခဲလေးတွေယူလာပြီး တူတစ်ချောင်းနဲ့ ထုပြီး တစ်ယောက်တည်းလမ်းပြင်တတ်တဲ့ ကျောင်းဆရာကြီး တစ်ဦးကို သတိရလိုက်မိတယ်။
မလေး မ စာတွေ လာဖတ်ပေမယ့် ကွန့်မန့်မရေးဖြစ်တာကြာပေါ့။
နေကောင်းလားမ .. သတိရတယ်
စေတနာချမ်းသာသူဟာ လောကမှာ စိတ်အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာခြင်းက ပူလောင်တယ်လေ...